Ihu ọhụrụ nke E-azụmahịa: Mmetụta nke Ịmụ Igwe na Ụlọ Ọrụ | Martech Zone
Ihu ọhụrụ nke E-azụmahịa: Mmetụta nke Ịmụ Igwe na Ụlọ Ọrụ
Fraịde, Ọktọba 29, 2021 Fraịde, Ọktọba 29, 2021 Henry Bell
Ọ dịtụla mgbe ị tụrụ anya na kọmputa nwere ike ịmata ma mụta usoro iji mee mkpebi nke ha? Ọ bụrụ na azịza gị bụ mba, ị nọ n'otu ụgbọ mmiri dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ e-azụmahịa; onweghi onye nwere ike ibu amụma ọnọdụ ya ugbu a.
Otú ọ dị, mmụta igwe arụwo ọrụ dị ukwuu na mgbanwe nke e-azụmahịa n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Ka anyị leba anya n'ebe e-azụmahịa dị ugbu a yana otu esi eme ya ndị na-enye ọrụ mmụta igwe ga-akpụzi ya n'ọdịnihu adịghị anya.
Kedu ihe na-agbanwe na ụlọ ọrụ e-azụmahịa?
Ụfọdụ nwere ike ikwere na azụmahịa e-commerce bụ ihe ọhụrụ dị ọhụrụ nke gbanwere ụzọ anyị si azụ ahịa, n'ihi ọganihu nkà na ụzụ n'ọhịa. Otú ọ dị, nke ahụ abụghịcha ikpe.
Ọ bụ ezie na nkà na ụzụ na-ekere òkè dị ukwuu n'otú anyị si emekọrịta ihe na ụlọ ahịa taa, e-azụmahịa dị kemgbe ihe karịrị afọ 40 ma ọ dị ugbu a karịa mgbe ọ bụla.
Ire ahịa e-azụmahịa n'ụwa niile ruru ijeri $ 4.28 na 2020, yana ego a na-ere ahịa na-atụ anya iru $ 5.4 trillion na 2022.
Mana ọ bụrụ na teknụzụ na-adị mgbe niile, kedu ka mmụta igwe si agbanwe ụlọ ọrụ ugbu a? Ọ dị mfe. Ọgụgụ isi na-ewepụ ihe oyiyi nke usoro nyocha dị mfe iji gosi otú ike, na mgbanwe, ọ nwere ike isi bụrụ n'ezie.
N'ime afọ ndị mbụ, ọgụgụ isi na mmụta igwe adịchaghị ewulite yana dị mfe na ogbugbu ha na-enwu n'ezie n'ihe gbasara ngwa ha nwere ike ime. Agbanyeghị, nke ahụ adịkwaghị.
Ụdị nwere ike iji echiche dị ka ọchụchọ olu iji kwalite ngwaahịa ha n'ihu ndị ahịa ka teknụzụ dị ka mmụta igwe na chatbots na-agbasawanye. AI nwekwara ike inye aka site na ibu amụma amụma na nkwado azụ azụ.
Ngwa igwe mmụta na nkwanye ugwu
Enwere otutu isi ngwa nke teknụzụ a na azụmahịa e-commerce. N'ọ̀tụ̀tụ̀ zuru ụwa ọnụ, ígwè ọrụ nkwado bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu. Ị nwere ike nyochaa nke ọma ọrụ ịntanetị nke ọtụtụ narị nde mmadụ site na iji igwe mmụta algọridim na ịhazi nnukwu ọnụọgụ data n'ụzọ dị mfe. Ị nwere ike iji ya mepụta ndụmọdụ ngwaahịa maka otu ndị ahịa ma ọ bụ otu ndị ahịa (nkewa akpaaka) dabere na mmasị ha.
Ị nwere ike ịchọpụta nke ibe-ibe nke onye ahịa jiri site n'ịtụle nnukwu data enwetara na okporo ụzọ webụsaịtị ugbu a. Ị nwere ike ịkọwa ihe ọ nọ na-eme na ebe o jiri oge ka ukwuu. Ọzọkwa, a ga-enye nsonaazụ na ibe ahaziri iche yana ihe atụ aro dabere na ọtụtụ isi mmalite nke ozi: profaịlụ nke mmemme ndị ahịa gara aga, mmasị (dịka ọmụmaatụ, ihe omume ntụrụndụ), ihu igwe, ọnọdụ na data mgbasa ozi ọha.
Ịmụ igwe na Chatbots
Site n'ịtụle data ahaziri ahazi, chatbots nke igwe mmụta igwe na-akwado nwere ike ịmepụta mkparịta ụka "mmadụ" na ndị ọrụ. Enwere ike ịhazi chatbots site na ozi zuru oke iji zaghachi ajụjụ ndị ahịa site na iji mmụta igwe. N'ikpeazụ, ka ndị mmadụ na bot na-emekọrịta ihe, ọ ga-aka mma ka ọ ghọta ngwaahịa / ọrụ nke saịtị e-commerce. Site n'ịjụ ajụjụ, chatbots nwere ike inye Kupọns ahaziri ahazi, kpughee ohere ndị nwere ike iwe iwe, ma gboo mkpa ndị ahịa nwere ogologo oge. Ọnụ ahịa imepụta, iwulite na ijikọ chatbot omenala maka webụsaịtị bụ ihe ruru $28,000. Enwere ike iji obere mbinye ego azụmaahịa kwụọ ụgwọ maka nke a.
Nmụta igwe na nsonaazụ ọchụchọ
Ndị ọrụ nwere ike iji mmụta igwe chọta kpọmkwem ihe ha na-achọ dabere na ajụjụ ọchụchọ ha. Ndị ahịa na-achọ ngwaahịa ugbu a na saịtị e-azụmahịa site na iji mkpụrụokwu, yabụ onye nwe saịtị ahụ ga-ekwe nkwa na ekenyela mkpụrụokwu ndị ahụ na ngwaahịa ndị ọrụ na-achọ.
Ịmụ igwe nwere ike inye aka site n'ịchọ synonyms nke mkpụrụokwu ndị a na-ejikarị eme ihe, yana nkebiokwu atụnyere ndị mmadụ na-eji maka otu ajụjụ ahụ. Ikike nke teknụzụ a iji nweta nke a sitere n'ikike ya iji nyochaa weebụsaịtị na nyocha ya. N'ihi ya, saịtị e-azụmahịa nwere ike idowe ngwaahịa ndị dị elu n'elu ibe ahụ ka ha na-ebute ụzọ pịa ọnụego na mgbanwe ndị gara aga.
Taa, ndị dike dị ka eBay aghọtala mkpa nke a dị. N'ihe karịrị nde 800 gosipụtara, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ibu amụma ma nye nsonaazụ ọchụchọ kachasị mkpa site na iji ọgụgụ isi na nyocha.
Ịmụ igwe na e-azụmahịa ezubere iche
N'adịghị ka ụlọ ahịa anụ ahụ, ebe ị nwere ike ịgwa ndị ahịa okwu ka ha mụta ihe ha chọrọ ma ọ bụ mkpa, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-ejupụta na nnukwu data ndị ahịa.
N'ihi ya, nkebi nke ndị ahịa dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ e-azụmahịa, ebe ọ na-enye ohere ka azụmaahịa hazie usoro nkwukọrịta ha maka onye ahịa ọ bụla. Ịmụ igwe nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe ndị ahịa gị chọrọ ma nye ha ahụmịhe ịzụrụ ahaziri ahazi.
Ịmụ Igwe na Ahụmahụ Ndị Ahịa
Ụlọ ọrụ ecommerce nwere ike iji mmụta igwe nye ndị ahịa ha ahụmịhe ahaziri iche. Ndị ahịa taa ọ bụghị naanị na-ahọrọ kamakwa na-achọ ka ha na ụdị ọkacha mmasị ha na-ekwurịta okwu n'ụzọ nkeonwe. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịhazi njikọ ọ bụla na ndị ahịa ha site na iji ọgụgụ isi na mmụta igwe, na-ebute ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
Ọzọkwa, ha nwere ike igbochi nsogbu nlekọta ndị ahịa site na iji mmụta igwe. Site n'ịmụ igwe, ọnụ ọgụgụ agbahapụ ụgbọ ala ga-ebelata ma ire ere ga-abawanye n'ikpeazụ. Bots nkwado ndị ahịa, n'adịghị ka mmadụ, nwere ike ịnye azịza enweghị mmasị n'oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ abalị.
Ịmụ igwe na nchọpụta aghụghọ
Anomalies dị mfe ịhụ mgbe ị nwere ọtụtụ data. N'ihi ya, ị nwere ike iji igwe mmụta ịhụ ọnọdụ na data, ghọta ihe 'nkịtị' na ihe na-adịghị, na nata alerts mgbe ihe na-adịghị.
'Nchọpụta aghụghọ' bụ ngwa kachasị ewu ewu maka nke a. Ndị ahịa na-eji kaadị kredit zuru ezu zụta nnukwu ngwaahịa ma ọ bụ ndị na-akagbu ihe ha nyere mgbe ebufere ihe ndị ahụ bụ nsogbu ndị na-ere ahịa na-enwekarị. Nke a bụ ebe mmụta igwe na-abata.
Ọmụmụ igwe na ọnụ ahịa dị egwu
N'ihe gbasara ịnye ọnụahịa siri ike, mmụta igwe na azụmaahịa e-commerce nwere ike ịba uru nke ukwuu ma nwee ike inyere gị aka ịkwalite KPI gị. Ikike nke algọridim ịmụta usoro ọhụrụ site na data bụ isi iyi nke uru a. N'ihi ya, algọridim ndị ahụ na-amụta mgbe niile ma na-achọpụta arịrịọ na usoro ọhụrụ. Kama ịdabere na mbelata ọnụahịa dị mfe, azụmaahịa e-azụmahịa nwere ike irite uru site na ụdị amụma nke nwere ike inyere ha aka ịchọpụta ọnụahịa dị mma maka ngwaahịa ọ bụla. Ị nwere ike ịhọrọ onyinye kacha mma, ọnụahịa kacha mma, ma gosipụta ego nrịanrịa n'ezie, oge niile na-atụle atụmatụ kachasị mma iji bulie ahịa na njikarịcha ngwa ahịa.
Ụzọ mmụta igwe si akpụzi ụlọ ọrụ e-azụmahịa enweghị atụ. Ngwa nke teknụzụ a nwere mmetụta kpọmkwem na ọrụ ndị ahịa na uto azụmahịa na ụlọ ọrụ e-commerce. Ụlọ ọrụ gị ga-emeziwanye ọrụ ndị ahịa, nkwado ndị ahịa, ịrụ ọrụ nke ọma na mmepụta, yana ime mkpebi HR ka mma. Algọridim mmụta igwe maka e-azụmahịa ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa maka azụmaahịa e-azụmahịa ka ha na-etolite.
Lelee Ndepụta nke ụlọ ọrụ mmụta igwe
Tags: ike ịnye ọnụahịae-azụmahịaecommercenkwanye ngwaahịa ecommercensonaazụ ọchụchọ ecommerceecommerce nkewanchọpụta aghụghọngwa igwenchọpụta aghụghọ aghụghọ igwe mmụtangalaba mmụta igwendị na-enye ọrụ mmụta igweigwe nkwanye ngwaahịansonaazụ ọchụchọ ngwaahịankewa
Henry Bell bụ onye isi ngwaahịa na Vendorland. Ọ bụ onye na-ahụ maka teknụzụ azụmaahịa na-ebuli uto mgbanwe site na atụmatụ teknụzụ dijitalụ. Henry bụ onye nyocha nke ukwuu na onye na-edozi nsogbu na-arụkọ ọrụ nke ọma nwere nkà n'ụzọ pụtara ìhè na njikwa ngwaahịa, njikwa ngwa, na nyocha data.
Rebranding: Otu nnabata mgbanwe ga-esi eto ika ụlọ ọrụ gị
Kedu ka Ngwọta Logistics Reverse nwere ike isi mee ka nhazighachi nlọghachi n'ahịa E-azụmahịa